Ihe Ọhụrụ na Agwaetiti nke Bahamas Oge oyi a
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Bahamas Breaking » Ihe Ọhụrụ na Agwaetiti Bahamas a
Aviation • Awards • Akụkọ Bahamas Breaking • Akụkọ Bahrain na -agbasa • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • omenala • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • Iwughachi • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Ihe Ọhụrụ na Agwaetiti Bahamas a
Ọ ka mma na Bahamas oge oyi a ka obodo ahụ na-anabata ndị ọbịa ụwa ka ha rie anyanwụ, aja na oke osimiri. Site na imeghe ụlọ nkwari akụ na azụmahịa na-akpali akpali na kredit $ 500 nke Bahama Out Islands Promotion Board, Bahamas bụ ebe kachasị mma maka ndị njem na-achọ mgbapụ n'oge oyi.
Ministri nke njem na-ebido Guide Guide Island - N’ịgbalị ime atụmatụ maka nchekwa, Bahamian dị ezigbo mkpa ka ọ bụrụ nke na-enweghị ntụpọ, Mịnịstrị na-ahụ maka njem nleta webatara mmekọrịta map nke ahụ na-enye ndị ọbịa agwaetiti site na agwaetiti site na ụkpụrụ nduzi kachasị, gụnyere oge azụmahịa nke arụmọrụ, nnweta osimiri na ndị ọzọ.
Ntughari nkwari akụ n'ofe Bahamas - Agwaetiti Atlantis ndokwa imeghe na Disemba 10, 2020, na Eleuthera's French Leave Resort ga-emepe December 15, 2020. Nnukwu Hyatt Baha Mar na Exuma si Grand Isle Resort & Spa ha abụọ ga-emepe ọzọ na Disemba 17, 2020. Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ Royal Bahamian ga-emeghe ọzọ Jenụwarị 28, 2021, mgbe Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ Emerald Bay ga-emegheghachi na February 1, 2021.
Mgbasapụ Exuma na ọdụ ụgbọ elu Long IslandFE (1) s - Exuma International Airport na-enweta nkwalite dị ukwuu. Ihe oru ngo a, nke akwadoro ibido na onwa na-abia, ga-eme ka onu ogugu ya si na square 2,000 ruo 60,000 square. Obodo a na-eme atụmatụ ịgbatịkwu ọdụ ụgbọ elu ndị ọzọ maka Long Island, nke a na-atụ anya ka emechaa na Machị 2022. Ọrụ a ga-agbasa ụzọ ụgbọ elu ọdụ ụgbọ elu ahụ site na 4,000 ụkwụ ruo 6,500 ụkwụ.
Nkwalite na enye
Maka ndepụta zuru ezu, akara ngosi maka azụmahịa na nchịkọta maka Bahamas, gaa na www.bahamas.com/deals-kpọpu.
Out Island Black Friday Ikuku Ebe E Si Nweta - Promlọ Ọrụ Nkwalite Bahama Out Islands na-enye a $ 500 ikuku kredit Black Friday a ga - enyere ndị njem aka ịhazi ezumike ezumike Bahamsị ọzọ. Ebe E Si Nweta na-akwụ ụgwọ mgbe ị na-edebanye akwụkwọ ngwugwu 7-abalị nke ikuku na-esonye na họtel ndị otu na-ahụ maka nkwalite Bahama Out Islands. Ndị njem ga-edetu akwụkwọ site na Nọvemba 30, 2020 wee gaa site na Jenụwarị 31, 2021. datesbọchị Blackout ga-adị.
Ihe ngwugwu mbu nke Atlantis - Na ememe nke imeghari ebe a, Atlantis na-enye ndi ọbịa ha abalị mbụ n'efu ya na onu abali abuo. Enwere ike ịgba akwụkwọ n'etiti November 10 - 22 ma dị irè maka ịnọ n'etiti Disemba 10 - 17.
Baha Mar Dream wepu na ngwugwu Getaway - Grand Hyatt Baha Mar na-enye ndị ọbịa ọbịa 20 percent kwụsịrị naanị oge maka imeghari December 17 imeghe. Debe ya site na Disemba 6, 2020 maka oge ịnọ site na Eprel 4, 2021.
Ebe E Si Nweta Coral Sands Resort - Ebe ezumike Harbor Island a hụrụ n’anya na-enye a $ 100 ntinye ego gụnyere nri ụtụtụ kọntinent a na-eri kwa ụbọchị maka ụzọ abụọ na ịnweta egwuregwu mmiri niile anaghị arụ ọrụ mgbe ị ga-anọ abalị abụọ ma ọ dịkarịa ala. Onyinye a dị irè site na Disemba 15, 2020.
Onyinye na mbuli
Njem Kwa izu Onyinye Magellan na-achọpụta Mgbasa Bahamas 'N'agbanyeghị Rockin' - The Bahamas Ministry of Tourism & Aviation's Still Rockin 'mgbasa ozi e nyere onyinye kacha mma ebe mgbasa ozi / mgbasa ozi mkpọsa. N'ime nsogbu nke Hurricane Dorian, mkpọsa ahụ gosipụtara na agwaetiti ndị bụ isi nke 14 nke Bahamas na-enweghị mmetụta nke oké mmiri ozuzo ahụ, nke nyere aka na ndebiri ndebanye nke mba ahụ nke nde 7.2 nde ndị ọbịa na 2019. Onyinye a makwaara mgbasa ozi nke Site na Bahamas With Love Love, nke e ọdịda ọlaọcha na ebe ahia TV ahia Atiya.
Na ihe karịrị agwaetiti 700 na ọnụ mmiri na agwaetiti 16 pụrụ iche, Bahamas dị naanị 50 kilomita site n'ụsọ oké osimiri Florida, na-enye ụzọ mgbapụ dị mfe nke na-ebuga ndị njem na-adị kwa ụbọchị. Agwaetiti The Bahamas nwere ịkụ azụ, mmiri mmiri, ụgbọ mmiri na ọtụtụ puku kilomita nke mmiri kachasị mma na osimiri na-eche ezinụlọ, ndị di na nwunye na ndị njem. Nyochaa agwaetiti niile nwere inye www.bahamas.com ma ọ bụ na Facebook, YouTube or Instagram ịhụ ihe mere Ọ ka Mma na The Bahamas.